ပင်မ - Myanmar Brilliance Auto
Myanmar Brilliance Auto Co.,Ltd မတည်ထောင်ခင် 1991 ခုနှစ်ကတည်းက မော်တော်ကား မျိုးစုံ အား ပြည်ပမှ တင်သွင်းရောင်းချခြင်း၊ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုံထုတ် လုပ်ငန်းများတည်ထောင်ခဲ့ပြီး မော်တော်ကား နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (28)နှစ် ရှိသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချိန်နှင့်အမျှ ခေတ်မှီတိုးတက်နေပြီး အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် တီထွင် ထားသော ဆန်းသစ်သော စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပြည်သူများ သုံးစွဲလျှက်ရှိရာ ကမ္ဘာအဆင့်မှီ နည်းပညာ များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော Brilliance Auto V3, V6, V7 ကားကို မြန်မာပြည်တွင် သုံးစွဲနိုင်ရန် SKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။
Myanmar Brilliance Auto Co.,Ltd သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံ(2)၊ ဦးရွှေမြူးလမ်းနှင့်၊ ဦးအောင်သူလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(246/M) တွင်ရှိပြီး မြေဧက 2.41၊ စက်ရုံ(3)လုံး၊ မြေနှင့် အဆောက်အဦးပါရှိသော နေရာတွင် ထုတ်လုပ်နေပါသည်။
Myanmar Brilliance Auto Co.,Ltd ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေကျပ်သန်း 4,177.939/- အမေရိကန် ဒေါ်လာ 0.549 သန်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်မြေနေရာအဆောက်အဦးများတွင် တစ်ဦးတည်းပိုင် အဖြစ် ထုတ်လုပ်နေပါသည်။
Brilliance Auto V3, V6 နှင့် V7 ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပြည်ပပညာရှင်များကို ခေါ်ယူခန့်ထားပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါသည်။ Maintenance After Sale Service အစီအစဉ်များ ကိုလဲ Customer စိတ်တိုင်းကျ အဆင်ပြေစေရန် စီစဉ်လျှက်ရှိပါသည်။
Brilliance V7 SKD
Brilliance V7 is the latest product that is built on M8X intelligent modular pla
2019150 mi Automatic
Brilliance V6 CBU
2012150 mi Automatic
Brilliance V3 SKD
New crossovers up to represent the Chinese car Brilliance V3 2019-2020 model yea
Myanmar Brilliance Auto is one of the most trusted car brand in Myanmar, delivering the latest auto technologies with brilliant designs and innovative technologies at the best deals.
The Best After-Sales Services
We are very confident about our best after-sales services to our customers. Every customers are happy and get satisfactions regarding our after-sales services.
We are providing services by our expert team of experienced and friendly technicians.
Quality Assurance Production
We always upheld the “Quality First” production philosophy and maintained first-rate quality standards,acomprehensive quality supervision, safety assurance system and excellent services to ensure sustainable development.
စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရန် ဘွတ်ကင်လုပ်၍ Land Rover ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှာဖွေပါ။
Post by iiadmin | သတင်း
Myanmar Brilliance Auto Co.,Ltd.
MYANMAR BRILLIANCE AUTO COMPANY LIMITED is authorized to import the BRILLIANCE A
For valiance v7 skd customers Colours available on valentiance v7 skd Color �
Myanmar Brilliance Auto After-Sales Service
Myanmar Brilliance Factory
No. (246/M) Corner of U Shwe Myuu St and U Aung Thu St, Hlaingtharyar Industrial
Established Strategic and Working Relationship with Global Leading Automotive
Would you like to find our showroom? Let us help you with professional marketer.
Many clients are thrilled by the service that we deliver and are happy to tell us. Read about what some have said about us here.
“Brilliance V6 ၏ပထမဆုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ရခြင်းအတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူပါသည်။ကား၏ ဒီဇိုင်းမှာ ထူးခြားပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိကာ အင်ဂျင် အားလည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။
After sales service အထူးကောင်းမွန်ပြီး ၁၀၀% စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေသည်။
Brand Name နဲ့ သူ့ရဲ့အထာကျတဲ့ Logo ကိုခံစားလို့ရတယ်
အဲ့ဒါတွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ Bonus အနေနဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ After Sales Service ကိုထပ်ရလိုက်တယ်
“ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ စျေးနှုန်းဖြစ်လို့။ SUV စီးချင်လို့။ After Sales Service ကောင်းမယ် ယုံကြည်လို့။
“ဝယ်ဖြစ်တာက မောင်းကြည့်တာ အဆင်ပြေ တရုတ်ကားကို တရုတ်အင်ဂျင်နဲ့ဖြစ်လို့ After sale Service ကြိုက်လို့
၁) BMW နဲ့ JV လုပ်ထားပြီး ကား design လေးက အရောင်းမိုက်တာကြောင့်
၂) After Sale Service ကို အရမ်းကြိုက်တာ ကြောင့်
၃) ကိုယ့်၀င်ငွေနဲ့ ကိုက်တဲ့ ကား တန်ဖိုးကြောင့်
“အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပဲ တည်ကြည်ခန့်ညား ဇိမ်ရှိသလားမပြောနဲ့ …. လှပသေသပ် ဘဝင်သက်စေလောက်တဲ့ အပြုံးအလှပိုင်ရှင် ဆွဲငင်ယူစေ … နင်းတိုင်းငြိမ်သက် ဆွဲတိုင်းပါသော V7
“V3 စဝယ်ဖြစ်တာက Value for money ဖြစ်တယ် အသစ်ထွက်လာတဲ့ China Brand တွေထဲမှာ Reliable ဖြစ်တယ် Price for performance ကားတစ်စီးလို့ယုံကြည်တယ် ဒီလိုစဉ်းစားပီးမှ ဝယ်ခဲ့တာပါ
No. (47/48-B), Corner of Hantharwaddy and Bahao Rd, Sanchaung Tsp, Yangon. +951503550, +951504333, +951501444, +951504666, +959974040800, +959444475555 info@myanmarbrillianceauto.com
Copyright by MBA . All Rights Reserved.
Developed by Impulse International.